Ukuphulukiswa Kwamahhala Nge-Voucher - U-Edwin Van Der Hoeven
Inikwe amandla yi- Uhlobo
Ukwelashwa ngokomoya kuyindlela yokunakekelwa okuhambisana futhi akuyona indawo yokunakekelwa okuvamile!
Ingabe ukwelashwa okungokomoya kuyathandeka kuwe?
Wonke umuntu angafunda le ndlela yokuphulukisa, ngoSepthemba inkambo yeMeditation & Healing iqala ngoLwesithathu kusihlwa. Kusihlwa lapho ucwiliswe ngokumangalisayo emandleni okuphulukisa emhlabeni kamoya.
Chofoza inkinobho ukuthola eminye imininingwane nokubamba iqhaza.
Ukuzindla kanye nokuphulukisa inkambo